Ọbịa: Down 33%
Mmegharị peeji: Down 18%
Ndenye aha RSS: Up 5%
Nanị ụzọ m na-ewere bụ ịga n'ihu na-ezipụ Del.icio.us njikọ. M kwụsịrị ide ihe, na-eche echiche banyere ide ihe ma kwụsị isonye na mkparịta ụka blọọgụ ndị ọzọ. Otu n'ime ihe kpatara na etinyeghị m ụzọ ndị ọzọ iji jide ndị na-agụ akwụkwọ bụ na m mere chọrọ ịhụ ihe ga-eme.
Inwe ihe RSS ndepụta na-egosi na ọ bụ usoro mbipụta akwụkwọ nwere ike ijigide ndị debanyere aha (yana ọbụna ịkwalite). Enweghị m obi ụtọ, mana m ga-adị njikere ịkụ nzọ na ọ bụ ndị ọbịa bịara ebe a site na njin ọchụchọ, hụrụ ọtụtụ ndị debanyere aha m nwere, ma chee na ya kwesịrị isonye. Njikọ kwa ụbọchị site na Del.icio.us na-enye ụfọdụ uru maka ndị debanyere aha ọhụrụ a.
Ọ bụrụ na ị bụ onye debanyere aha ọhụrụ, tụrụ anya n’aka m! Anọ m n'etiti mgbanwe ọrụ ma na-ebunye onye ahịa ọrụ nkewa. Eziokwu, a na m na-a aụ biya ma ọ bụ abụọ kwa mgbede n'izu a na ndị ọrụ ibe m sitere na onye ọrụ m ugbu a. Ha bụ ụlọ ọrụ Inc 500 na-eto n'ike n'ike achọghị m ndị ọrụ ka ha chee na m na-ahapụ ụlọ ọrụ ahụ maka ụfọdụ ihe kpatara ya… M na-agagharị na nsogbu ọhụrụ na ohere dị egwu.
Mọnde ga-abụ ụbọchị mbụ m na onye ọrụ ọhụụ m na-atụ anya ya. Ka ọ na-erule ngwụsị izu na-abịa, ihe kwesịrị ị dajụọ m wee laghachi n'ọrụ. Site na ọrụ a, a ga m ekpughere ndị ụlọ ọrụ na-emepe emepe, ụlọ ọrụ ọhụrụ n'ịntanetị (ụlọ ahịa na ụlọ oriri na ọ restaurantụ )ụ), teknụzụ ọhụrụ (Njikọ ahịa nke Point) na e-commerce. Jikere maka ụfọdụ ezigbo ọdịnaya ka m na-abanye n'ime!